Imandarmedia.com.np: को हुन् यी तीन नेता ? जसले नेपाली काँग्रेसभित्र शक्तिशाली भूकम्प ल्याउन सक्छन्
Main News, Political » को हुन् यी तीन नेता ? जसले नेपाली काँग्रेसभित्र शक्तिशाली भूकम्प ल्याउन सक्छन्
को हुन् यी तीन नेता ? जसले नेपाली काँग्रेसभित्र शक्तिशाली भूकम्प ल्याउन सक्छन्
पछिल्लो समयमा नेपालमा कृयाशिल रहेका राजनीतिक दलहरु आन्तिरक विवामा फसेका छन् । पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वका लागि आन्तारिक अन्तरविरोध चर्किनु स्वाभाविक पनि हो । चाहे त्यो नेपाली कांग्रेसभित्र होस् वा चाहे नेकपा एमालेमा अर्थात माओवादी केन्द्र र अन्य पार्टीहरु सबैमा नेतृत्वको बहस चर्किरहेको छ ।